Ọganihu B2B Ọdịnaya Mgbasa Ozi Ọma Na-achọ Njikwa | Martech Zone
Ebumnuche B2B nke Ọma na-achọ Nchịkwa
Fraịde, Ọktọba 9, 2015 Fraịde, Ọktọba 9, 2015 Douglas Karr
Ndị na-ere ahịa na-agbakarị mgba naanị iji gboo mkpa nke ọdịnaya ha na mmemme azụmaahịa email. Ọtụtụ mgbe, a na-ewulite atụmatụ ndị ahịa anyị gburugburu usoro ha. Akụkọ, ntọhapụ ngwaahịa, mmelite ọrụ ma ọ bụ ọbụlagodi usoro izu ụka na-ekwupụta ọdịnaya nke ebipụtara.
N'ezie, nsogbu bụ na atụmatụ azụmaahịa azụmahịa gị anaghị agbaso usoro njem gị maka atụmanya gị. Azụmahịa nwere ike ịchọ ozi ị nwere ike ịnye kwa ụbọchị n'afọ, ma ọ bụ ikekwe site na oge, ma ọ bụ site na usoro mmefu ego. Oge bụ otu n'ime nkwa nke usoro nzụlite na ịzụ ahịa usoro akpaaka - inye ọdịnaya nke na-adọta ma ọ bụ na-eme ka azụmahịa ahụ gaa na ntughari dabere na ha nhazi oge.
Ma akpaaka ka na-enweghị ntụpọ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyocha ma na-agụta data ndị ahịa iji mepụta nke kachasị okirikiri ndụ. N'ezie, nke bụ eziokwu bụ na azụmaahịa ọ bụla na-arụ ọrụ na usoro ha - na-agbasi ike ma n'oge adịghị anya ma atụfuola atụmanya ahụ. Were nwayọ nwayọ ma onye na-asọmpi gị nwere ike nweta ọrịre ahụ.
Enwere otutu akụkụ na mmepe ọdịnaya. Ọtụtụ mgbe, azụmaahịa na-arụ ọrụ na arụpụta ihe. Otu ihe atụ nwere ike ịbụ ịmepụta blọọgụ kwa ụbọchị, akwụkwọ akụkọ kwa izu, akwụkwọ ozi kwa ọnwa na akwụkwọ akụkọ ọcha kwa ọnwa. Ma arụpụta anaghị enweta azụmahịa ebe ọ kwesịrị ịdị. Ọnụnọ bụ ịnwe ọdịnaya kwesịrị ekwesị na ebe kwesịrị ekwesị mgbe atụmanya ahụ na-achọ ya.
Yabụ, azụmaahịa na-emepe kalenda ọdịnaya siri ike, usoro dị n'ime, na usoro nkwalite na mkpọsa mmekọrịta ọha na eze iji hụ na ihe ịga nke ọma. Teknụzụ igwe eji arụ ọrụ ọhụụ na-eji teknụzụ mmụta igwe iji bulie nkwukọrịta na atụmanya ma jegharịa gaa na ntughari na ọsọ dabere na ndị ahịa.
O zughi oke.
N'ezie, nsogbu bụ na onye ọ bụla tozuru etozu na-arụ ọrụ n'otu akụkụ ma eleghị anya ọbụna na-etinye teknụzụ yiri ya. O zughi ezu iji nọgide na-emepụta ọdịnaya na usoro na-adịghị agwụ agwụ, ugboro ugboro. Vingga ahịa na azụmaahịa site na atụmanya azụmaahịa gaa na ndu ruru eru chọrọ ikike. Na ibugharị onye ruru eru na ire ahịa chọrọ ntụkwasị obi.
Mgbe azụmahịa na-achọ azịza, ha na-achọ ya n'aka otu ikike. Ndị ọchụnta ego chọrọ iwelata ihe egwu, yabụ na ha na-azụta ihe n'aka ndị na-ere ahịa na azịza ya na ikike ụlọ ọrụ.
A na-elegharakarị ikike anya n'agbanyeghị na ọ bụ isi ihe ga-eme ka azum ahịa azụmaahịa na-aga nke ọma. Tweet Nke a!
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-achọ enyemaka nke ndị na-eme ihe ike nwere ikike na ụlọ ọrụ enyere iji kwalite nke ha. Anyị ahụla nsonaazụ dị iche na usoro a kemgbe mmetụta bụ mgbe n'ezie dị nnọọ ewu ewu online.
Zọ kachasị dị irè iji nweta ọchịchị abụghị site na ịkwụ ụgwọ ya; obu iji wu nke gi. Tweet Nke a!
Iwuli ikike na ọdịnaya abụghị maka ịmepụta ọdịnaya ọhụrụ. Ọ bụ maka nyochaa ọdịnaya niile ị nwere na ịchọpụta ya. Ọ bụ maka iwepu ọdịnaya ndị ọzọ na-anaghị eduga ọ bụla ma ọ bụ na-agagharị atụmanya ala na ndụ ahụ.
Dị ka njiri ikike, enweghị usoro dị mma karịa Google. Algọridim nke Google malitere na afọ ndị na-adịbeghị anya iji lekwasị anya na mkpa na mmekọrịta dị n'etiti ndị mmadụ, azụmaahịa, ọnọdụ, aha ngwaahịa, yana ọbụlagodi ndị nọ n'ime ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche ma ụlọ ọrụ gị ọ bụ ikike, ị kwesịrị ị na-enyocha ebe ị kwadoro maka isiokwu ndị metụtara ihe atụmanya na-eme n'ịntanetị.
Itinye ọkwa nke ọma na nsonaazụ njin ọchụchọ, ị ga-emerịrị ọdịnaya dị egwu. Maka nchịkọta okwu nyere, nke ahụ chọrọ ka ị mụọ nke na-emeri ọchụchọ ma rụọ ọrụ zuru oke. Anyị na-amata isiokwu ndị asọmpi na-ogo karịa anyị, anyị na-azụlite ọdịnaya ka mma site n'iji ederede, eserese, na vidiyo… na anyị na-emelite ọdịnaya nke anyị nwere nke ahụ adịghị ọkwa nke ọma.
Mgbalị anyị agbanweela site na 100% mmepụta ọdịnaya ọhụụ ugbu a na ihe ruru 50% ohuru na 50% njikarịcha nke ọdịnaya dị ugbu a. Ebumnuche ọdịnaya anyị agala site na iwepụta akụkọ ọhụụ, infographics, na vidiyo. Ugbu a, anyị na-ebuli ọdịnaya anyị dị ugbu a, bipụta ya ọzọ (n'otu URL) ma kwalite ya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Anyị na-etinye usoro ịkwụ ụgwọ iji bulie ogo ya.
N'ihi na ọ bụ kasị mma ọdịnaya, ọ ga-adịkwu mma. Nsonaazụ na-eju anya. N'ime narị narị isiokwu isiokwu anyị na-arụ ọrụ, anyị esila na ọkwa 11 gaa na ọkwa nke 3. Ntugharị anyị karịrị 270% maka nnweta nnweta. Ọnụ anyị kwa ndu na-agbadata ebe ndu ndu anyị na-akawanye mma.
Ikpeazụ dee na nke a. Ikike na-abịara ndị mmadụ mfe karịa ụlọ ọrụ azụmaahịa, yabụ ị ga-etinyerịrị ndị isi gị ebe ahụ. Apple bụ nnukwu akara, mana ikike azụmaahịa abụghị aha dịka Steve Jobs, Jonathon Ives, Tim Cook, Steve Wozniak, Guy Kawasaki, wdg.
Nye ndị gị ohere ka ha bụrụ ndị ikike wee nwee ike meziwanye ikike azụmahịa gị. Hụ ndị isi gị ka ha na-ekwu okwu na ihe omume na nzukọ na-etinye azụmahịa gị n'ihu ndị na-ege ntị dị mkpa na n'oge. Mmekọrịta nke mmadụ ga-ebelata oge achọrọ iji mechie ahịa ebe ọ bụ na ị nwere ike igosipụta ikike gị ma n'otu oge nweta ntụkwasị obi nke atụmanya ahụ.
Tags: ikikeb2bb2b ikikentughari b2bikike ọdịnayaGuy kawasakiJonathon Ivesarụ ọrụSteve WozniakTim Cook
Ngwa ọdịnala: Olee otu Planningzọ Mkpa Si Adị, Prototyping, na Nnwale?
Etu esi azụ ahịa ngwa ekwentị gị